Bit By Bit - Introduction - 1.4.1 Readymades uye Custommades
Tsvakurudzo Social vari digitaalinen zera kunosanganisirei Readymades, Custommades, uye nevaNefirimu simba.
Mumwe yakakurumbira urinals nokusingaperi yakatengwa muna 1917, uye kuti secondary ndiko, mune dzimwe nzira, kufanana mijenya munzanga tsvakurudzo ari digitaalinen zera. The secondary muna mubvunzo zvakatengwa by the artist French Marcel Duchamp. Mushure kutenga nayo, Duchamp scribbled "R. Mutt 1917 "pairi obva ainzi vaakasika Tsime (Figure 1,2). Kunyange zvayo kugamuchira kwokutanga nokuti akanga vachidziya, Tsime kwasvika vaiona chimwe chezvinhu zvinokosha zvidimbu ounyanzvi ano nokuti aitaura achinja sei vanhu kufunga unyanzvi (Higgins 2004) . Tsime muenzaniso mumwe Chirinuruwowaka, apo munyori wemifananidzo anoona chimwe chinhu ariko kwatova munyika iyoyo repurposes nayo unyanzvi.
Figure 1.2:. Tsime kubudikidza Marcel Duchamp Fountain muenzaniso mumwe Chirinuruwowaka, apo munyori wemifananidzo anoona chinhu kuti ariko kwatova munyika iyoyo creatively repurposes kuti unyanzvi. Saka kure, yakawanda munzanga tsvakurudzo ari digitaalinen zera harina zvinobatanidzwa repurposing Data kuti akasika zvimwe chinangwa chisiri tsvakurudzo. Photo kubudikidza Alfred Stiglitz, 1917. Source: Wikimedia Commons .
Zvakawanda evanhu tsvakurudzo ari digitaalinen zera anenge, saka kure, rakafarirwawo chimiro, kunyange tisina pamwe chete mugumisiro. Vaongorori vakaona kuti digitaalinen zvinyorwa akasikwa nehurumende uye mabhizimisi kuti zvinangwa-zvakadai yavo sezvo foni matanda, digitized magwaro, uye zvemagariro nhau Data-inogona repurposed nokuda evanhu tsvakurudzo (Lazer 2015) . Mune mamwe mazwi, yakawanda munzanga tsvakurudzo ari digitaalinen zera kwave kutsvaka Data Readymades.
Zvisinei, sezvo vaimbi vakawanda havana kufamba kutsvaga Readymades, vakawanda vaongorori zvemagariro kare havana kufamba famba achitsvaka mashoko zvinogona repurposed. Asi, pane kuva date-kutinhwa, akabudirira zvikuru munzanga tsvakurudzo kare kwave mubvunzo-rwakadzokera. Ndiko, mumwe mutsvakurudzi aiva mubvunzo uye ipapo vakawana kana akasika Data vaifanira kupindura mubvunzo iwoyo. Mifananidzo uyo unoratidza izvi zvimwe werudzii basa ndiro Michelangelo. Aida kuti chifananidzo Dhavhidhi saka akapedza 3 years muchibata pamwe chidhina machena chokusika Paaidzidzisa ake (Figure 1,3) Dhavhidhi haasi Chirinuruwowaka. ndiko Custommade.
Akasabvumirana 1.3: Dhavhidhi Michaelangelo David muenzaniso Ndimi iyo nemaune akasikwa. ndiko Custommade. Style aya akasiyana Readymades akadai Tsime (Figure 1,2). tsvakurudzo Social vari digitaalinen zera kunosanganisirei zvose Readymades uye Custommades. Photo kubudikidza Jörg Bittner Unna, 2008. Source: Wikimedia Commons .
tsvakurudzo Social vari digitaalinen zera kunosanganisirei zvose Duchamps uye Michelangelos, vose Readymades uye Custommades. Bhuku rino zvichaita dzichaongorora nzira idzi mbiri, uye zvakakoshesa, zvichaita sei ivo dzinogona kubatanidzwa kuva remasanganiswa simba. Somuenzaniso, Joshua Blumenstock uye nevamwe vaiva chikamu Duchamp uye chikamu Michelangelo; ivo repurposed the serura runhare Data (a Chirinuruwowaka) ivo zvakasikwa wavo Ongororo Data (a Custommade). kubatane nekuita uku Readymades uye Custommades ndiye muenzaniso kuti muchaona kumarudzi bhuku rino.